Forex | တွင် အကာအကွယ်လုပ်နည်းကို လေ့လာပါ။ ကုန်သွယ်မှု2ခုလေ့လာပါ - PRO ကဲ့သို့ကုန်သွယ်မှု။ ဇွန်လ 2022
Forex အကြောင်းကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရည်အချင်းအများဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားဖြင့်၊ ခြံစည်းရိုး forex သည်ဤအတန်ငယ်မတည်ငြိမ်သောကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်၌စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုတန်ပြန်ရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် Forex ဗျူဟာအသစ်ကို ရှာဖွေနေပါက၊ hedging ငွေကြေးများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အနည်းငယ်ကို သင့်အား ပေးရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex တွင် အကာအကွယ်ပြုနည်းမှ သင်အသုံးပြုနိုင်သော အဓိကဗျူဟာများနှင့် ကိရိယာများအထိ အရာအားလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားပါမည်။
သင့်အား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ဘေးကင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အကာအကွယ်ငွေကြေးများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် ကောင်းသောပွဲစားတစ်ဦးကို ရွေးချယ်နည်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အလင်းပြပါမည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် 'hedging' သည်ကုန်သည်များက၎င်းတို့အားစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ၏ခြိမ်းခြောက်မှုကိုထိန်းညှိနိုင်ရန်ပြုလုပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မင်းရဲ့အနေအထားကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကာကွယ်မှုကိုရေတိုဖြေရှင်းချက်လို့သတ်မှတ်တယ်။
၎င်းကို Forex ဈေးကွက်တွင်မတည်ငြိမ်မှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးစျေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောကြီးမားသည့်သတင်းဇာတ်လမ်းများကြောင့်ကုန်သည်များကများသောအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြလိမ့်မည်။
စောင်ရန်းကိုအဓိကကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ခုလုံးကအသုံးပြုသည် နှင့် နေ့စဉ်ကုန်သည်များ။ hedging စတင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောနည်းဗျူဟာများနှင့်ကိရိယာအချို့ရှိပြီးမကြာမီကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြသွားပါမည်။
ကုန်သည်များသည် Forex ကိုအဘယ်ကြောင့်စောင်ရသနည်း။
ကုန်သည်များသည် Forex ကိုကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည် ငွေကြေးအတက်အကျများကို တိုက်ဖျက်ရန် လုံခြုံသော အသားတင် ဖန်တီးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်မဆို စွန့်စားရနိုင်သော Forex ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် အမှန်တကယ်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ကာကွယ်မှုနည်းဗျူဟာသည် သင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို သက်သာစေရန် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုစရာမရှိပါ။
ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့် Forex ဈေးကွက် သဘာဝအားဖြင့် မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေကြေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် အခြားစျေးကွက်များတွင် အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောကုန်သည်များသည် hedging အတွက်အမှတ်မရှိဟုခံစားရပြီး trading forex ၏သဘောသဘာဝကိုလက်ခံလိုသည်။ အဲဒီလို မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ စျေးကွက်မှာ သူတို့ရဲ့ စွန့်စားရမှုကို လျှော့ချလိုတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမှန်မှာ - ကုန်သွယ်ရေး Forex သည်စွန့်စားမှုများဖြစ်နိုင်သည်ကိုလက်ခံရန်သင်ပျော်ရွှင်မည်မဟုတ်ပါက hedging ကိုရေတိုဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုလိုပေမည်။ သင်တစ် ဦး ငွေကြေး pair တစုံ၏တန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးလိမ့်မည်ဟုခံစားချက်ရှိပါကပြန် bounced မီ, သင်သည်သင်၏မဟာဗျူဟာသို့ခြံထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများအသုံးပြုသော ရေပန်းအစားဆုံးနည်းဗျူဟာများနှင့် ကိရိယာအချို့မှတဆင့် သင့်အား လည်ပတ်စေမည် - ထို့ကြောင့် သင်သည် အချိန်တိုအတွင်း လိုလားသူကဲ့သို့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Forex trading ရဲ့ နိမိတ်ပုံမှာ ကာရန်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို အခု သင်သိပြီ၊ ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ သင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာပြီးပါပြီ။
ဤတွင်ယနေ့အသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံး Forex hedging မဟာဗျူဟာများ။
တခါတရံ 'ရိုးရှင်းသော hedging' ဟုခေါ်သည်၊ များသောအားဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်လက်ရှိအနေအထားတွင်ကွဲပြားသောရာထူးနှစ်ခုကိုဖွင့်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ဒါတစ်ခုပါလိမ့်မယ် ကြာရှည် (အမှာစာ) တ တို (ရောင်းရန်) - ဒါကြောင့်သူတို့ကပconflictိပက္ခဖြစ်လမ်းကြောင်းများ၌သွားနေကြသည်။
ဤတွင် hedging ပုံစံ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင် AUD / USD ကဲ့သို့သော Forex pair တစုံတွင်နေရာတိုနေပြီဟုဆိုပါစို့
မင်းရဲ့ Forex ကုန်သွယ်မှုကို အခုမှပဲ တားထားပြီ။
တိုက်ရိုက်အခြံအရံရှိ သင့်အသားတင်အမြတ်သည် သုညဖြစ်နေမည်ဖြစ်သဖြင့် Forex စျေးကွက်တွင် သင်၏ကနဦးအနေအထားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါမှ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်သွားတဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အကယ်၍ သင်စောလျှင်စွာ - စျေးကွက်သည်သင်၏ကန ဦး ကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်ဒုတိယကုန်သွယ်မှုဖြင့်အမြတ်ရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုရာထူးကိုမစွန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်သိမ်းပြီးမေးစေ့ကိုအရှုံးပေးလိမ့်မည်။
forex ပွဲစားတိုင်းသည် တိုက်ရိုက်အကာအရံများကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့် ရာထူးများကို ဖယ်ထုတ်ရန် ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် Forex စိမ်းလန်းစိုပြေရေးမဟာဗျူဟာသည် 'အပြုသဘောဆက်နွယ်မှု' အဖြစ်ယူဆပြီးကွဲပြားသောငွေကြေးအတွဲနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တစ်ခုချင်းစီ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ရာထူးများကိုယူခြင်းဖြစ်သည်။
စုံတွဲ 'ဆက်နွယ်မှု' သည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ငွေကြေးများ ပြုမူပုံအား ကိန်းဂဏန်းဖြင့် သရုပ်ဖော်သည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်၊ တူညီသော ဦးတည်ရာသို့ ရွေ့သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ကျပန်းဖြစ်စေ။
ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကြားရှိဆက်နွယ်မှု၏အားသာချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဆက်စပ်မှုကိန်းများကိုဤဥပမာတွင်တိုင်းတာသည့်နည်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို -1 မှ +1 အထိဒofမပုံစံဖြင့်ပြသည်။
ဤတွင် Forex စောင်း၏နေရာနှင့်ဆက်စပ်ပုံကိုဥပမာတစ်ခုပြပါ။
အပြုသဘောဆက်စပ်မှု: ဆက်စပ်မှု +1 ဆိုပါစို့။ ဤအချက်သည်ငွေကြေးအတွဲနှစ်ခုစလုံးသည်များသောအားဖြင့်တူညီသော ဦး တည်ရာသို့အတိအကျရွေ့သွားသည်ကိုပြသသည်။ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုအချို့တွင် AUD / USD၊ EUR / USD, GBP / USD နှင့် NZD / USD တို့ပါဝင်သည်။ ဥပမာအနေနဲ့ AUD / USD နဲ့ EUR / USD ကိုသုံးမယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် - AUD / USD သည်အထက်သို့တက်သည်ဆိုပါက၊ EUR / USD သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု: အခြားတစ်ဖက်တွင် USD / CHF နှင့် USD / CAD တို့ကိုအသုံးပြုကြပါစို့။ ဤဥပမာတွင်၊ -1 ၏ဆက်စပ်မှုက USD / CHF နှင့် USD / CAD တို့သည်များသောအားဖြင့်ဆန့်ကျင်သောလမ်းကြောင်းများ၌ရွေ့လျားသွားကြောင်းဖော်ပြသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုငွေကြေးအတွဲများ၏ဥပမာအချို့မှာ USD / JPY၊ USD / CAD နှင့် USD / CHF တို့ဖြစ်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း USD သည်အခြေခံငွေကြေးဖြစ်သည်။
GBP / USD ကိုသင်တိုတောင်းပြီဆိုပါစို့၊ သင်၏ USD ၏အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန် EUR / USD တွင်ရှည်လျားသောအနေအထားကိုဖွင့်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
ပေါင်လျှင် ကိုပြု အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျဆင်းသွားလျှင်၊ ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာရှည်သောအနေအထားကအရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်၏ GBP / USD အနေအထားတွင်တိုးတက်မှုများကြောင့်၎င်းကိုလျော့ပါးသက်သာစေလိမ့်မည်။ အမှန်ကတော့, USD ကဤအချက်မှာကျလျှင်, တိုတောင်းသောအနေအထားမှမဆိုအရှုံးသင့်ရဲ့ခြံအားဖြင့် counterbalancing လိမ့်မည်။
အန္တရာယ်များပါ၀င်သောကြောင့် ငွေကြေးအတွဲများစွာကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမထားသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် USD တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ထားသော်လည်း၊ တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် EUR တွင်တိုတောင်းသောအန္တရာယ်နှင့် GBP ၏ရှည်လျားသောအန္တရာယ်တို့ကိုလည်းထိတွေ့စေသည်။ အရာမှာ၊ မည်သည့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနှင့်အာမခံချက်မရှိပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်၏အန္တရာယ်ကို အောင်မြင်စွာ လျှော့ချနိုင်လျှင် အမြတ်အစွန်းများကို မြင်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် 'တိုက်ရိုက်စူးစမ်းခြင်း' နှင့် 'မျိုးစုံသောငွေကြေးဆိုင်ရာခြံစည်းရိုး' တို့အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာငွေကြေးမျိုးစုံဖြင့်ခြံစည်းရိုးတွင် - တစ်ခုတည်းသောအနေအထားသည်အခြားဆုံးရှုံးမှုများထက်အမြတ်အစွန်းပိုများနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ခြံနှင့်အတူ, အသားတင်ရလဒ်ကိုသုညထက်ကျော်လွန်လိမ့်မယ်။
Options ကို Hedging ကို
Forex option တစ်ခုသည်သင့်အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်မကုန်မှီ FX pair ကိုသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူက hedging tools များနှင့်ပတ်သက်။ အခါ, options ကိုတကယ်အသုံးဝင်ပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာသူတို့သည်သင့်အားအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်၎င်းသည် 'ပရီမီယံ' ရွေးစရာကိုသာသင်ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဒီမှာ Forex options hedging မဟာဗျူဟာ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်:
သင့်တွင် စျေးနှုန်း 1.32 ဖြင့် GBP/USD တွင် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုရှိသည်။
သို့သော် ရုတ်တရက် ကျဆင်းလာမည်ကို သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည် ၁ လအကြာကုန်ဆုံးမည့် ၁.၃၂ တွင် put option ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာတွင်ကုန်ဆုံးချိန်ရောက်သောအခါစျေးနှုန်းသည် ၁.၃၂ ထက်နိမ့်ကျပါကသင်၏ရှည်လျားသောအနေအထားသည်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
GBP / USD ၏စျေးနှုန်းသည် ၁.၃၂ ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါက put option (premium) ၏စျေးနှုန်းကိုသာသင်သာလိုအပ်လိမ့်မည်။
ပွဲစားပလက်ဖောင်းအားလုံးသည် ကုန်သည်များအတွက် ရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်သည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန်မှာ အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအရာသည် သင်စိတ်ဝင်စားသည့်အရာဖြစ်ပါက အဆိုပါပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အား ထိုနည်းအတိုင်း ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေကြောင်း သေချာစေရပါမည်။
Hedging Forex - Tools များ
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ Forex တွင် အကာအကွယ်ပေးသည့်အခါ ပုံမှန်တွေ့မြင်ရမည့် ဝေါဟာရအချို့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးများသော အကာအကွယ်ကိရိယာအချို့၏ ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုကို စုစည်းထားသည်။
အလိုအလျောက် Forex ခြံစက်ရုပ်
Forex hedging လုပ်သောအခါ အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုစနစ်အား အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် သင်သည် ကုန်သည်အသစ် သို့မဟုတ် ခြေတစ်လှမ်း နောက်ပြန်ဆုတ်လိုလျှင် အထူးသဖြင့် ဤကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေများကတော့ forex trading robots လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Forex EAs (ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး)။ ၎င်းတို့သည် လူမှုမီဒီယာတွင် ဖော်ပြမှုနောက်ကျခြင်းများစွာရှိခဲ့ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ကျော်ကြားသူများ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုတောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်ကို သင်သတိမပြုမိပါက - အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ်သည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြု၍ သင့်ကိုယ်စား ဝယ်ယူရောင်းချသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဇယားများကို ဖတ်ရှုနည်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် လနှင့်ချီ၍ လေ့လာရန် မလိုအပ်တော့ဟု ဆိုလိုသည်။ ယင်းအစား၊ ဘော့တ်သည် အားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပြီး တစ်ပတ်လျှင် 24 ရက် တစ်ရက်လျှင်7နာရီ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ Forex ခြံစက်ရုပ်တွင်၎င်းကိုအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံဖြင့်ပုံစံပြုလိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်လမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်းနှင့်ရာထူးမျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်နိုင်သည်။ အများကြီးသင်ကိုယ်တိုင်စောင်ရသောအခါ, တူသော Forex စက်ရုပ် သင်၏ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် Forex စျေးကွက်တွင်မမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အခါ၊
ဤသို့သောအရောင်းအ ၀ ယ်မျိုးတွင်သင်ကန့်သတ်ချက်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မသတ်မှတ်ထားပါကသင်၏ပွဲစားသည်ပထမနေရာကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ အမှန်ကတော့ကုန်သွယ်ရေးအသစ်က 'netting off' လို့လူသိများတဲ့ကုန်သွယ်မှုအသစ်ကိုပယ်ဖျက်တော့မယ်။
ဤတွင် 'net off' ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်တွင် ယူရို/USD တွင် ယူရို 200 ဖြင့် ဝယ်ယူရန်အမှာစာရှိသည်ဆိုပါစို့။
ထို့နောက် သင်သည် ယူရို 200 ရောင်းရန်အမိန့်ကို EUR/USD (၎င်းကိုကာကွယ်ရန်) ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အမှာစာတင်ထားခြင်းကြောင့် မူလရာထူးကို ပိတ်ပါမည်။
သင့်မှာယူမှုကို 'ပိတ်လိုက်ပြီ' ပြီးပါပြီ။
တစ်နည်းဆိုရသော် သင်သည် Forex၊ စတော့များ၊ မာကျောသောသတ္တုများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ သို့မဟုတ် ထိုကိစ္စအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစား တစ်ခုခုကို အရောင်းအဝယ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ - ထူးချွန်သူအား ဆန့်ကျင်ဘက်အမိန့်တစ်ခုဖြင့် အမြဲတမ်းဖွင့်ထားသော အနေအထားကို သင်ပိတ်လိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တူညီသောငွေကြေးအတွဲတွင် တစ်ချိန်တည်းတွင် အဝယ်အရောင်းအနေအထားနှစ်ခုစလုံးကို ဖွင့်ထားနိုင်သည့် Forex ပွဲစားတစ်ဦးကို သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Force open သည်အသုံးဝင်သောခြံစည်းရိုးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွဲစားများကသင်၏ရာထူးနေရာများကိုပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒီ function ကကန ဦး ကုန်သွယ်မှုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာနေရာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရတယ်။
ရလဒ်အနေဖြင့်ရာထူးနှစ်ခုလုံးကိုစျေးကွက်တစ်ခုတည်းအတွင်း၌ပင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာဆက်လက်ထားရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် နှင့် တိုတို) ။
အောက်တွင် 'force open' ၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဥပမာတွင်၊ သင်သည် AUD/NZD တွင် £500 short position ကိုဖွင့်သည်ဟု ယူဆကြပါစို့။
AUD/NZD သည် အတိုချုံးစျေးနှုန်း တက်လာမည်ဟု သင်ခန့်မှန်းသည်။
သင်ယခု AUD/NZD တွင် £500 ဝယ်ယူမှုအနေအထားကိုဖွင့်ပါ (ဖြစ်နိုင်ချေဆုံးရှုံးမှုများကိုလျှော့ချရန်အတွက်) ဆိုကြပါစို့။
ဤအခြေအနေတွင်ပွဲစားများသည်သာမန်အားဖြင့်သင်၏ရာထူးနှစ်ခုစလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ရှင်းပြသကဲ့သို့သင်၏ပထမရာထူးကိုပိတ်လိုက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် 'force open' ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်၏အမှာစာနှစ်ခုလုံးသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီတစ်ခုတည်းငွေကြေး pair တစုံကိုစောငျရနျးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အချို့ပွဲစားများသည် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကို ခွင့်မပြုသောကြောင့် ၎င်းကိုရှာဖွေခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အား အကာအကွယ်ပေးမည့် ပွဲစားတစ်ဦးကို ရှာဖွေသည့်အခါ သတိထားရန် အဓိက တိုင်းတာမှုစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုထားပါသည်။
မှတ်သားထားပါ၊ သင့်တွင် Forex အကာအကွယ်ပေးသည့်ပွဲစားကို သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရန် အချိန်မရှိပါက၊ ဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးတွင် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုငါးခုကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပွဲစားတစ်ခုစီကို ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းကုန်သည်များအဖွဲ့မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စိစစ်ပြီး ငွေကြေးများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့် ကာရန်ခွင့်ပြုကြောင်း သေချာစေပါသည်။
သင့်လျော်သောအာဏာပိုင်တစ်ဦးမှ အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသော ပွဲစားကိုရှာဖွေရန် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင် (FCA).
FCA ယူကေရှိပွဲစားပလက်ဖောင်းပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်သည်။ ကုန်သည်များအားဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှုမှသို့မဟုတ်ပွဲစားဒေ ၀ ါလီခံခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်ပွဲစားတစ် ဦး သည်လိုင်စင်ရရှိထားသည်ကိုသေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ ဖောက်သည်များ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်လူတိုင်းအတွက်မျှတသောဘဏ္spaceာရေးဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်းကိုမပြောပါနှင့်။
သင်တွေ့ရသောပွဲစားတိုင်းသည်အခကြေးငွေများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားပါလိမ့်မည်။ ပွဲစားတစ် ဦး သည်ကုန်သွယ်မှုတိုင်းအတွက်ကော်မရှင်ကိုကောက်ခံနိုင်သော်လည်းအခြားပလက်ဖောင်းတစ်ခုသည်ကော်မရှင်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည် - သို့သော်ညအိပ်။ မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသည်။
သင်ကြည့်ရှုနေသောပွဲစားသည် Forex ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင် ပူးတွဲပါရှိသော မြင့်မားသောကော်မရှင်အခကြေးငွေများရှိပါက၊ သင်၏ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများအတွက် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်စဉ်းစားလိုပေမည်။
သင်သည် AUD/USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
သင်၏ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင် ၀.၈% ရလိုသည်။
ယခု သင် လောင်းကြေး ပေါင် 1,500 ဟု ပြောပါ။
ရာထူးဖွင့်သောအခါ သင်၏ပွဲစားသည် £12 ယူလိမ့်မည်။
သင်၏အကာအရံအနေအထားကို အမြတ်အစွန်းအမှတ်တွင် ပိတ်သည်ဟုယူဆပါက - သင်သည် ကော်မရှင်ခ £12 ကို ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်၊ ကုန်သွယ်မှုတိုင်းတွင် ဤမျှလောက်စားသောကော်မရှင်သည် သင့်အတွက် အကာအကွယ်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ဟုတ်ပါတယ်, hedging ဖြင့် စိတ်ကူးသည် ကြီးမားသော အမြတ်အစွန်းများကို သေချာပေါက်ရရန် မဟုတ်ဘဲ ၎င်းကို မျှတအောင် ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် သင်၏ ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် သင့်အား ကော်မရှင်အခမဲ့ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်စေမည့် နေရာများတွင် အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီး ထိန်းညှိထားသော ပွဲစားလက်တစ်ဆုပ်စာ ရှိပါသည်။
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်မှာ FX pair တစုံ၏ ၀ ယ်စျေးနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်မျှသာဖြစ်သည် pips။ ပိုများသော pips ၏နံပါတ်အနိမ့်။ တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုသည်ကုန်သည်များအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Forex ခြံ ၀ င်ခြင်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
4 pip ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူပြန့်ပွားပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဥပမာတစ်ခုပေးဖို့:
သင်သည် GBP/USD အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ကြပါစို့။
ရောင်းဈေးက 1.1447 ပါ။
4 pips သည် များစွာသောအသံမဟုတ်သော်လည်း forex ပွဲစားနေရာ၌၊ ၎င်းကိုစျေးကြီးသည်ဟုယူဆသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် Forex hedging ကို အမှန်တကယ် လက်တွေ့မကျနိုင်ပေ။
ဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသော ပွဲစားအများစုသည် အဓိကငွေကြေးအတွဲများပေါ်တွင် 1 pip ထက်နည်းသော ပျံ့နှံ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် - ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ eToro ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများလည်း ကမ်းလှမ်းသည်။ ပွောငျးလဲတတျသော ပျံ့နှံ့ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပြန့်ပွားမှုဟာစျေးကွက်အခြေအနေနဲ့အညီပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုတယ်။
Forex သို့ရောက်သောအခါရွေးချယ်ရန်အတွဲများစွာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်၏ Forex ပွဲစားသည်သင့်အတွက်ကမ်းလှမ်းချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်အဓိကအတွဲများမှသည် exotics နှင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်ငွေကြေးများအထိ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ပွဲစားက အကာအကွယ်ပေးတဲ့အတွက်၊ သူတို့က မင်းကို ဘယ်နည်းလမ်းကိုမဆို သုံးခွင့်ပေးမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစာမျက်နှာကိုဖတ်ပြီးရင် တိကျတဲ့ဗျူဟာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် (like ဉီးခေါင်းရေ) သင်ကြိုးစားချင်သည်၊ ထို့နောက်သင်၏ပွဲစားကခွင့်ပြုပါ။
တဖန်၊ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုစီသည် ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ပွဲစားဆိုက်အများစုသည် သုံးစွဲသူများအား ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် e-wallets ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ငွေသွင်းခွင့်ပြုသည်။ PayPal က. အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် Bitcoin ကဲ့သို့သော cryptocurrencies မှတစ်ဆင့် ကုန်သည်များကို ပေးချေရန်ပင် ခွင့်ပြုသော်လည်း Visa ကဲ့သို့ အများအားဖြင့် မမြင်နိုင်ပေ။
စီမံဆောင်ရွက်ချိန်၏အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ပွဲစားအများစုသည် သင်၏အပ်ငွေကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် သင်သည် ဘဏ်ငွေလွှဲမှတစ်ဆင့် အပ်နှံပါက သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ ရက်များစွာကြာသွားနိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း Tools များနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသအတွင်း အသုံးအများဆုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းအချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
Parabolic Stop and Reverse (SAR)။
ဤနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအချို့ကိုငွေစီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများဖြင့်စုစည်းပါ။ သင်စတင်နိုင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနေအထားတွင်ရှိနိုင်သည်။ ဤကိရိယာများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းမှာသရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်တွင်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Forex trading တွင်သမိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းဇယားများကိုလေ့လာခြင်းသည်အနာဂတ်စျေးကွက်အခြေအနေနှင့်အနာဂတ်အခြေအနေများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စျေးကွက်တွင်အတွေ့အကြုံနည်းသူဖြစ်လျှင်ပွဲစားပလက်ဖောင်းအချို့သည်ဖောက်သည်များအားပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်သရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများကိုရွေးချယ်ပေးသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်စျေးကွက်အခြေအနေတွင်သရုပ်ပြငွေဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကိုမစွန့်စားဘဲ Forex ခြံရံခြင်းနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပွဲစား / ကုန်သွယ်သူနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိရန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သည့်နောက်ဆုံးအရာမှာ ၀ န်ဆောင်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းမရှိသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Forex သည် ၂၄/၇ စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့ကို ၂၄/၇ ကိုလည်းသင်ရလိုသည်။
အသုံးများသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာများမှာ တိုက်ရိုက်ချတ်၊ အီးမေးလ်၊ ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံနှင့် တယ်လီဖုန်းတို့ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော FAQ ကဏ္ဍတစ်ခုရှိခြင်းသည် အရောင်းအ၀ယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေလျှင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယခုသင်သည် hedging forex နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုသိပြီးပွဲစားကိုရွေးချယ်သောအခါသတိပြုရမည့်အဓိကကျသောတိုင်းတာမှုများ၊ သင်စတင်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေပေမည်။ သို့ဆိုလျှင် သင်၏ forex hedging အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ယခုချက်ချင်းစတင်နိုင်စေရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁။ ပွဲစားသို့စာရင်းသွင်းပါ
သင်ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစား၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွားပြီး 'အကောင့်ဖွင့်ခြင်း' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ အများအပြားကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် ခိုင်မာသော စကားဝှက်ကိုလည်း ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ ID ကိုတင်ပြပါ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ၊ ဆားတန်ဖိုးရှိသည့်မည်သည့် Forex ပွဲစားမဆိုသည်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအတည်ပြုရန်သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြီးခဲ့သည့် ၃ လအတွင်းထုတ်ပေးသောသင်၏နိုင်ငံတော်အခွန်နံပါတ်နှင့်အသုံးစရိတ်ဥပဒေကြမ်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်တို့ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းအကျဉ်းနှင့်သင်၏ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတင်ပြရန်လိုလိမ့်မည်။
ထို့နောက်၊ သင်သည် ရန်ပုံငွေအချို့ကို အပ်နှံရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် လိုအပ်သော အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ရပါမည်။ အများအားဖြင့် ရနိုင်သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း အများစုမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည့် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းမှလွဲ၍ ချက်ခြင်းချက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၄: Forex အကောင့်ကိုစတင်ရန် / Demo အကောင့်ကိုစမ်းပါ
အဲဒါပါပဲ၊ သင်သည် ယခု သင်၏ကိုယ်ပိုင် Forex ပွဲစားအကောင့်ဖြင့် စာရင်းသွင်းပြီး ကုန်သွယ်မှုကို စတင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင့်တွင် အရောင်းအ၀ယ်အတွေ့အကြုံများစွာရှိနေပြီဆိုလျှင်ပင်၊ သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖြင့် စတင်ရန် မဆိုးသေးပါ။ အထူးသဖြင့် သင်သည် Forex Hedging တွင် အသစ်ဖြစ်နေပါက၊
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် hedging ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားများ
အခုဆိုရင်သင်ဟာ hedging forex နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့သွားကိုက်နေပြီ။ hedging မဟာဗျူဟာကိုလက်ခံပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်တဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်ရှာဖို့လိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဖော်ပြချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသော အကောင်းဆုံးပွဲစား2ဦးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် သင့်အတွက် စဉ်းစားရကျိုးနပ်ပါသည်။
၄။ AvaTrade - အဆင့်မြင့်လူမှုကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း
AvaTrade သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖောက်သည်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်၎င်း၏စင်မြင့်ပေါ်ရှိ Forex ပွဲစားဖြစ်သည်။ ပွဲစားသည် $ 2006 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောငွေကို ၂၀% ကြိုဆိုသောဆုကြေးငွေကို Forex တွင်အပ်နှံသောဖောက်သည်အသစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိပေးဆောင်နိုင်ပြီးအများဆုံးတန်ဖိုးအတွက်သင့်အကောင့်ထဲသို့ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤပလက်ဖောင်းသည်ကုန်သည်များ၊ စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်ကမ်းလှမ်းသောတူရိယာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင်ဤအရစ်ကျတကယ်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ AvaTrade ကို DupliTrade (လူမှုရေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း)၊ MT4 /5သို့မဟုတ် AvaOptions မှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။
ဤပွဲစားပလက်ဖောင်းသည် cryptocurrency နှင့် stock CFD ကဲ့သို့တူရိယာများ၏ပုံအစုအပုံကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးမတူညီသောငွေကြေးအတွဲ ၅၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်စတင်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်ပြီး Forex ကို hedging စတင်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ကန ဦး အပ်ငွေအတွက်£ 50 ဖြစ်သည်။ AvaTrade သည်ကော်မရှင်အခကြေးငွေလုံးဝမတောင်းဘဲဖောက်သည်များအားအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
အချို့သောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူသည်မှာ၊ ဒီ site မှာစွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆန်းစစ်ကိရိယာများရှိသည်။ Forex အပေါ်သြဇာကို 1:30 တွင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်နှင့်ခြံရန်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ်အပေါ်လုံးဝကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားပွဲစားများနည်းတူ AvaTrade ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်တရားစီရင်မှုများစွာမှလိုင်စင်ရရှိထားသည်။
တင်းကျပ်စွာ 0.70 pips ကနေပြန့်နှံ့
၂။ Capital.com - အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး
ပလပ်ဖောင်းသည် သွားလာရန် အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် Capital.com သည် အတွေ့အကြုံအဆင့်အားလုံးရှိ ကုန်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ သင့်တွင် ကောင်းမွန်စွာစုစည်းထားသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိပြီး၊ ထို့နောက်တွင် Capital.com အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်စရာလည်း ရှိသည် - နှစ်ခုစလုံးသည် အလွန်သန့်ရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤပွဲစားမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ရနိုင်သော တူရိယာများစွာရှိပြီး ကုမ္ပဏီသည် သင့်အား Forex ကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းနည်း - ဤအရစ်ကျသည် ကော်မရှင်ကို သုညဖြင့်ကောက်ခံပြီး အလွန်အပြိုင်အဆိုင် ပျံ့နှံ့မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ဒါတင်မကဘဲ အရောင်းအဝယ်ကနေ အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် စိတ်ပူစရာ အခကြေးငွေ မရှိပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စိတ်ပူစရာစရိတ်နည်းလေ၊ ပိုကောင်းလေပါပဲ။
forex အတွဲများနှင့်ပတ်သက်၍၊ ဤနေရာမှ ရွေးချယ်ရန် အစုအဝေးများ ရှိပြီး e-wallet သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေပါက £20 နီးပါးဖြင့် စတင်နိုင်ပါသည်။ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုဖြင့် အပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်ပါက အနည်းဆုံး £250 အပ်နှံရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ Leverage နဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ချင်ရင် ဒီမှာ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သို့သော် ESMA ထုပ်များအတိုင်း၊ margin ကို 1:30 (ယူကေနှင့် ဥရောပတွင်) ထက်မပိုစေရ။
£ 20 minumum သိုက်
သိုက်£ 250 သိုက် min transnfer
ယခု Capital.com သို့သွားပါ
သင်၏အန္တရာယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော 'သင်၏အလောင်းအစားများကို ထိန်းထားရန်' ဟူသောစကားသည် အင်္ဂလန်တွင် ၁၆၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းက ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ၊ ကုန်သည်များသည် စကားစုနှင့် ဗျူဟာကို ပုံမှန်အသုံးပြုကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Forex တွင် အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ၎င်း၏အန္တရာယ်များမရှိဘဲ လာမည်မဟုတ်သော်လည်း ထိုသို့သော မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်တွင် ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုတွင်သင်သည် Forex ကိုမည်သို့ကာကွယ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုသိပြီဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းငါးခုကိုအဓိကစည်းမျဉ်းဥပဒေများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးသင်၏ငွေကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ၏ဘဏ်စာရင်းတွင်သီးခြားဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
Hedging forex သည်အခြားငွေကြေးအမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမျှော်လင့်နိုင်စေရန်အတွက်ငွေကြေးစုံအနေအထားအပေါ်အန္တရာယ်လျော့ပါးစေမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဓိက hedging နည်းဗျူဟာနှစ်ခုမှာ - တိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောနှစ်မျိုးလုံးကိုအတူတူအတွဲသို့သွားခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သည်သည်ရှည်လျားသော Forex အနေအထားကိုကိုင်ထားပါကရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းခြင်း။
ငါသရုပ်ပြအကောင့်အပေါ် hedging Forex လေ့ကျင့်နိုင်သလား?
ဟုတ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Skilling ကဲ့သို့သော platform တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါကသင်စျေးကွက်မ ၀ င်ခင်နှင့်လေ့ကျင့်ရန်သရုပ်ပြအကောင့်စက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
သင်သည် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသော ပွဲစားတစ်ဦးနှင့်သာ စာရင်းသွင်းသင့်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသော ပွဲစားဖြစ်သည်။ ဥပမာများပါဝင်သည်; FCA၊ CYSEC၊ နှင့် ASIC စသည်တို့ကို သင်စိုးရိမ်နေသေးပါက၊ တရားဝင် စည်းမျဉ်းအဖွဲ့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရှိ လိုင်စင်နံပါတ်ကို စစ်ဆေးပါ။
ငါခြံ Forex လေ့ကျင့်နိုင်သလား?
ဟုတ်တယ်။ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာအခမဲ့ Demo အကောင့်ကိုကမ်းလှမ်းသောပွဲစားတစ်ယောက်အားစာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် Forex ကိုစောင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ ပွဲစားကုမ္ပဏီအများစုသည် mobile-friendly platform တစ်ခုကိုပေးသည်။ သင်သည်သင်၏လက်ဖဝါးမှကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအမှာစာများကိုငွေသွင်းနိုင်သည်။